‘सत्य घटनाहरूको संगालो माछा-माछा’ :: अशेष अधिकारी :: Setopati
अशेष अधिकारी काठमाडौं, मंसिर २०
तस्वीर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
‘माछा माछा मनोरञ्जक सिनेमा हो’
निर्देशक सुनील गुरूङ आफ्नो सिनेमा ‘माछा माछा’लाई सत्यघटनाहरूको संगालो भनेर व्याख्या गर्छन्।
‘यो कुनै एउटा घटनाबाट नभई छापिएका, पढिएका र हेरिएका विभिन्न समाचारका घटनालाई उनेर बनाइएको कथा हो। तिनै घटनालाई कमेडी मार्फत प्रस्तुत गरेका छौं,’ सिनेमाका दुई कलाकार सौगात मल्ल र विजय बरालसँगै रहेका सुनीलले भने।
सौगात मल्लले आफूलाई फिल्मको टिम र कथाले तानेको बताउँछन्।
‘एउटा त टिम भयो। आफ्नै साथीहरूसँगै नाटक गर्दै आइरहेकाले कतिपटक त नाटक नै गरिरहेको जस्तो पनि भयो मलाई। अर्को चाँहि उसले भनेजस्तै हो,' सुनीललाई देखाउँदै उनले भने।
उनका अनुसार फिल्ममा कहिल्यै थाहा नपाएको कुरा छैन। यहाँ हुने गरेका घटनालाई राम्ररी बुनेर यसको कथा बनाइएको उनको भनाइ छ। आफूलाई यसको स्क्रिनप्लेले तानेको बताउँदै उनले भने, 'दर्शकलाई यसले रमाइलो दिने देखेर हो।’
यसै फिल्मबाट अभिनेता दयाहाङ राई निर्माता पनि बन्दैछन्। दयाहाङ आफ्नो रूचिका कारण निर्माता बनेको बताउँछन्।
‘प्रोडक्सन मेरो रूचिको कुरा हो। समकालीन साथीहरू भएकाले यसमा म जोडिएको हुँ,' उनले भने, 'सुनील हामीसँग अगाडिदेखि नै काम गरिरहेको छ। त्यति बेलादेखि नै उसले आफ्ना सोच सुनाइरहन्थ्यो। स्क्रिप्ट तयार थियो र उसले म यो-योसँग काम गर्छु भनेर सुनाउँदै जाँदा गाँसिएको हौं हामी।'
निर्माताका रूपमा उनले अरू निर्मातासँग जोसिएर तदारूक्ता लिएर काम गरेको छैन तर पनि ल गरौं न त भनेर गरेको हो,’ दयाहाङले भने।
उनले ‘माछा माछा’ बाट निर्माताका रुपमा आफू कसरी डेब्यू भइयो भन्नेबारे बताए।
‘यो खतरनाक सिनेमा हो, यसले भयंकर कमाउँछ, त्यसैले गर्नुपर्छ भनेर गरेको सिनेमा होइन यो। अभ्यास हो। अघिल्लो सिनेमा पनि हामीले टिमका हिसाबले गरिसकेका हौं, यो पनि त्यसरी नै गरेको हो,’ उनले भने।
यस्तैयस्तै किसिमले आफू सिनेमामा जोडिएको अर्का कलाकार विजय बरालको भनाइ छ।
उनले सुनीलसँग ‘मिस्टर झोले’मा सँगै काम गर्दाको सम्झना गरे।
त्यो बेला सुनीलले विजयलाई तिमीले मसँग एउटा सिनेमा गर्नुपर्छ भनेका थिए रे। विजयलाई पात्रका हिसाबले आफूले यसअघि गरेका सबै सिनेमा उस्तैउस्तै लाग्छन्। उनमा गर्दै आएका नियमितभन्दा केही फरक पात्रमा अभिनय गर्न पाइयोस् लागिरहेको थियो।
त्यो अवसर यो सिनेमाले जुरायो। उनी सिनेमासँग जोडिए।
‘एउटा त गर्दै आएको भूमिकाभन्दा फरक भूमिकाको लोभ भयो अनि सिनेमा बनाउने टिम पनि हो,’ विजयले भने।
सिनेमा बनाउँदा एउटा सोच हुन्छ। तर स्क्रिप्ट बन्दा एक किसिमको बन्ने र पर्दामा आउँदै सोचेको भन्दा अर्कै बनेर र धेरैजसो अवस्थामा विपरीत किसिमको बन्ने खतरा नेपाली सिनेमा बनाउँदाका क्रममा प्रसस्तै भएको देखिन्छ। योबाट ‘माछा माछा’ कति पर होला?
यसमा निर्देशक सुनील आफ्नो सिनेमासँग सन्तुष्ट देखिए।
‘कुनै पनि निर्देशक आफ्नो सिनेमासँग शतप्रतिशत सन्तुष्ट त हुँदैन। नेपाली सिनेमा बनाउँदा सोचेजस्तो हुँदैन, अलिकति सम्झौता गर्नुपर्छ पहिले नै थाहा थियो। अगाडि जोसिएर बनाउँछु भनेर पछि हरेश खाने भन्दा पनि सकेको जत्ति बनाउँछु भनेर बनाएको छु,’ उनले भने।
आफ्नो सिनेमा दर्शकलाई मनपरोस् र त्यसले आफूलाई खुशी दिने सुनीलको आशा छ।
यसैगरी सिनेमाप्रतिको दृष्टिकोणमा सौगात र दयाहाङ भने केही रक्षात्मक छन्।
सौगातले आफूले आफ्नो कामबाट यस्तो उस्तो भनेर कहिले पनि आशा नराखेको र यसबाट पनि नराखेको बताए।
‘स्क्रिप्ट पढदा नै यसमा नयाँ कुरा छैन भनेर हामीलाई थाहा थियो। तर कथालाई मिलाएर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैको आधारमा सिनेमा गरेको हो। ‘लुट’देखि मैले के बुझेको छु भने सिनेमा सोचेको जस्तो हुँदैन। त्यसैले मैले सिनेमाले यो गर्छ भनेर आशा राख्दिन। एउटा रमाइलो सिनेमा बनेको छ। ‘माछा माछा’ हेर्दा दर्शकले रमाइलो मान्नु हुन्छ,’ उनले भने।
निर्माता भएपनि दयाहाङले पूरा सिनेमा हेरेका छैनन्।
उनले सिनेमाको फुटेजहरू हेरेका छन्। उनी सिनेमा मनोरञ्जक बनेको बताउँछन्।
‘पूरा सिनेमा त हेरेको छैन तर जति पनि फुटेजहरू हेरेको छु, त्यसको आधारमा मेरो भनाइ पनि सौगातको जस्तै हो। यसमा निर्देशकले आफ्नो तरिकाले सिनेमा भनेका छन्। भोलि सिनेमा हेर्दा दर्शकलाई के होला थाहा छैन तर यसमा सुनील गुरुङको आफ्नो शैली देखिन्छ। हेर्दा मनोरञ्जन मिल्छ त्यही हो,’ उनले भने।
त्यस्तै कुराकानीको सुरुवातमा फरक पात्र भएकाले सिनेमा गरेको बताएका विजयले सिनेमाको पात्र आफू जस्तै रहेको बताए।
आफूजस्तै भएकाले पात्रमा भिज्न उनलाई खासै कठिन भएन तर पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयास यस सिनेमाको भएको सुनाए।
‘मेरो स्वर अलि तिखो छ। त्यसैले मेरो अभिनय अलिक लाउड सुनिन्छ। यसमा मैले त्यसलाई अलिक कम गर्ने प्रयास गरेको छु। यही कुरा मैले सौगात दाइसँग सल्लाह लिदैं गरे। उहाँसँग सिक्ने मौका पनि भयो यो सिनेमा मलाई। त्यो हिसाबले यो सिनेमामा मेरो सिकाइ पनि छ र गरेका सिनेमा भन्दा फरक पनि। मेरो पात्रले मनोरञ्जन दिन्छ,‘ उनी भन्छन्।
पात्रकै प्रश्नमा सौगातले आफ्नो पात्रलाई एउटा सजिलो चरित्र भएको बताउँछन्।
सजिलो भएकाले यसमा उनलाई पात्रमा छिर्न कुनै त्यस्तो चुनौति-अप्ठ्यारो केही भएन। सिनेमा गर्दा उनले पात्रका केही सामान्य कुरामा ध्यान दिएका छन्।
‘त्यस्तो गार्हो,जटिल पात्र गरेको होइन। हुन त हरेकमा एक खालको मेहेनत त पर्छ नै तर यसमा त्यस्तो विशेष गर्नुपरेन। कतिपय बेलामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पात्र हुन्छ भने कतिपय बेलामा यसरी गर्दा हुन्छ यसलाई भनेर सजिलो पनि पर्न जान्छ, धेरै सोच्न र गर्न पर्दैन। यो सिनेमाको पात्र पनि यस्तै हो,‘ उनले थपे।
सौगातको कुरामा निर्देशक सुनील गुरुङले पूर्ण सहमति जनाए।
‘दर्शक यस्तै शैलीमा ‘कन्भिन्स हुने मेरो बुझाइ छ’, सुनीलले भने।
सिनेमामा पात्रहरूको भिड छ। यस्तोमा कथा अनुसार ती पात्रहरूको सन्तुलन हुनु महत्वपूर्ण छ। तिनको सन्तुलन मिलाउनु निर्देशकका लागि चुनौती नै हो। निर्देशक गुरुङ पनि यो चुनौतीसँग जानकार थिए। यसरी पात्र धेरै हुँदाको मुख्य चुनौतीमा पात्र अनुसारको कलाकार छनौट पर्छ,’ उनले भने।
यसको चुनौती सुनीललाई पनि थियो।
‘मलाई लेख्दै लागेको चुनौती नै पात्र अनुसारका सही कलाकारको छनौट गर्नु थियो। तर विस्तारै सबै मैले सोचे अनुसारको हुँदै गयो तर सुरुमा डर त मलाई थियो। स्क्रिप्ट फाइनल भइसक्दा पनि मेरो दिमागमा कुनै कलाकारहरू थिएनन्। एकएक गरी छान्दै गए, सबै आएपनि। सबै आएपछि म ढुक्क भएँ,’ उनले भने।
कोही कलाकार नसोची कथा लेखिएकाले यसमा कलाकारको स्क्रिन स्पेस मिलाउन उनलाई गार्हो परेन, किनकी उनले लेखनका समयमा नै यसलाई मिलाउँदै लगेका थिए।
दर्शकमा निर्देशकका रुपमा सुनिलको कथा भन्ने आफ्नै खाले शैली रहेको कुरा सिनेमाले स्थापित गर्ने सौगातको विश्वास छ।
‘नेपाली सिनेमामा धेरै निर्देशकको आफ्नो शैली र जनरा देखिदैन। यसमा त्यो देख्न पाइने मेरो विस्वास छ। यो सिनेमामा यो मैले सुनेको चिज छैन भन्ने नभएपनि निर्देशकको आफ्नो शैली छ र यो शैलीले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने आशा छ‘, सौगातले भने।
विजयलाई पनि सुनिल आफूले चाहेको कुरा निकाल्ने निर्देशक भन्छन्। उनको बुझाइ पनि सौगातको जस्तै हो।
सिनेमाका बारेमा सौगात, दयाहाङ, सुनील र विजयको एउटै भनाइ छ।
भन्छन्- १० मा १० हुने किसिमले सिनेमा बन्ने विश्वासमा यो सिनेमा बनाइएको हो, दर्शकलाई निराश नपार्ने अधिकतम प्रयास हामीले यो सिनेमामा गरेका छौं।
सबै तस्वीर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १९, २०७६, २३:४६:००
बी.पी. साहित्य सम्मान पुरस्कार साहित्यकार ज्ञानमणि नेपाललाई
भरिया बनेर विपीन कार्की भन्दैछन्ः डर छैन